ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ KNU ဥက္ကဋ္ဌတို့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိ၊ အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သွားရောက်မယ့်သတင်းတွေအပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ KNU ဥက္ကဋ္ဌတို့ တွေ့ဆုံဖို့...
28 ต.ค. 2562 - 10:16 น.
(၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တပ်ချုပ်တို့နဲ့ KNU ဥက္ကဋ္ဌတွေ့မယ်
နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးတို့ ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် ညနေပိုင်းမှာ သီးသန့် တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တွေ့ဆုံမှုမှာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပစ်ရပ်စာချုပ် NCA ပါအချက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ငြိမ်းချမ်း ရေးဖြစ်စဉ်မှာ အဓိကကျတဲ့ အပစ်ရပ်စာချုပ်အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေး JICM ကျင်းပဖို့အပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာတွေဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ KNU ရဲ့အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ပဒိုစောတာဒိုမှူးက ပြောပါတယ်။
JICM အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာ အတူတွေ့ရတဲ့ အတိုင်ပင်ခံနဲ့ KNU ဥက္ကဋ္ဌ
ဒါ့အပြင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုးဟာ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်မှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဖို့ ရှိပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဘယ်လိုပုံစံ ဆက်သွားမလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ ပဒိုစောတာဒိုမှူးက ဆက်ပြောပါတယ်။
JICM အစည်းအဝေး မကျင်းပနိုင်တာ တစ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်သလို ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေ ရပ်တန့်နေတဲ့အတွက် အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံမှုတွေကနေ ညှိနှိုင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
NCA လေးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို ဒီကနေ့ နေပြည် တော်မှာ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောမယ့် သူတွေထဲမှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
မူလက ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ RCSS ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်လည်း မိန့်ခွန်း ပြောဖို့ ပါဝင်ပေမယ့် ခရီးစဉ်ပျက်သွားတာကြောင့် တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
NCA ကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဆယ်ဖွဲ့ လက်မှတ်ထိုးထားပြီး ကရင်အမျိုးသားအစည်အးအရုံး KNU၊ ရှမ်းအဖွဲ့ RCSS၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP ၊ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP၊ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင် တပ်မတော် DKBA၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF၊ KNU/KNLA-PC၊ ပအိုဝ်းအဖွဲ့ PNLO၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ၊ လားဟူအဖွဲ့ LDU တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရခိုင်ကို ဒီနေ့ရောက်ဖို့ရှိ
အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေးဗစ်အာစတေးဝဲလ်ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ကို အောက်တိုဘာ ၂၈ မှာ ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်အတွင်း ပြည်နယ်အစိုးရအကြီးအကဲတွေ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအကြီးအကဲတွေ၊ အကြမ်းဖက်ခံရသူတွေ၊ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံသွားမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံရုံးရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် မစ္စ အာယာနီမန်းရင်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းက ပဋိပက္ခတွေကို ဖြေရှင်းရေးဟာ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ဒါကို မြန်မာအစိုးရနဲ့ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားဖို့လည်း ရှိတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒေးဗစ်အာစတေးဝဲလ်ဟာ ဂျပန်၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ တောင်ကိုးရီးယားနဲ့ တရုတ် စတဲ့ အရှေ့ အာရှဒေသ တွင်း နိုင်ငံတွေကိုသွားမယ့် ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကိုပါ လာရောက်တာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ပထမဆုံး မြန်မာ ခရီးစဉ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
OCHA လက်ထောက် အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ရခိုင်ခရီးစဉ် ပြီးဆုံး
ရခိုင် အကြံပေးအဖွဲ့ ဒုက္ခသည်လက်ခံရေး စခန်းတွေထိ သွားရောက်ရခိုင်အရေး ပိုကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ လုပ်နိုင်ခဲ့သင့် - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေးဗစ်အာစတေးဝဲလ်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနအောက် က အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ဒေသတွင်းရေးရာ တွေကို ကိုင်တွယ်တဲ့နေရာမှာ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦး ဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပစိဖိတ်ဒေသတွင်းမှာ အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီး အဲဒီအနေအထားက မြန်မာနဲ့အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်လည်း အရေးကြီးတယ်လို့ အာယာနီမန်းရင်းက ရှင်းပြပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို သူ လာရောက်တာဖြစ်ပြီး သူ့ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအပေါ်မှာ အမေရိကန်က ထားရှိတဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို မီးမောင်းထိုးပြတဲ့အနေနဲ့ လာရောက်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ အာယာနီက ဆိုပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်ကနေ ၃၀ ရက်ထိ ကြာမြင့်မယ့် သူ့ခရီးစဉ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အပြင် နေပြည် တော်နဲ့ ရန်ကုန်ကိုလည်း သွားဖို့ရှိပြီး အရပ်သားအစိုးရ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ အစည်းအတွေနဲ့ ဒေသခံလူထုတို့နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့လည်း ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အစီအစဉ်တော့ ပါဝင်ထားခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
(၃)အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ကိုနှိမ်နင်းရေး မပြီးသေးဘူးလို့ အမေရိကန်မဟာမိတ်တွေသတိပေး
အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Abu Bakr al-Baghdadi ကို သတ်နိုင်ပြီဖြစ်ပေမယ့် အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ကို နှိမ်နင်းရေး မပြီးသေးဘူးလို့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ မဟာမိတ်တွေက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
Abu Bakr al-Baghdadi ဟာ ထွက်ပြေးနေရင်း ဆီးရီးယားနိုင်ငံထဲက လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုထဲမှာ သူ့ရဲ့အသေခံ ဗုံးခွဲအင်္ကျီကို ဖောက်ခွဲသတ်သေသွားတာလို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က အတည်ပြုထား
ဒါဟာ အိုင်အက်စ်အဖွဲ့အပေါ် ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သွားတာမှန်ပေမယ့် ခြေလှမ်းတစ်ခုသာသာပဲရှိသေးလို့ ပြင်သစ်အနေနဲ့ အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ လုံး၀ ပျောက်သွားအောင် ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ ပြင်သစ် သမ္မတ အီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်က ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်စစ်တပ်က တိုက်ခိုက်ရေးခွေးတွေရဲ့အလိုက်ခံနေရတဲ့ Abu Bakr al-Baghdadi ဟာ ထွက်ပြေးနေရင်း ဆီးရီးယားနိုင်ငံထဲက လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုထဲမှာ သူ့ရဲ့အသေခံဗုံးခွဲအင်္ကျီကို ဖောက်ခွဲသတ်သေသွားတာလို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က အတည်ပြုထားပါတယ်။
Baghdadi ဟာ အီရတ်နဲ့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံထဲကနေရာတွေကို တိုက်ခိုက်သိမ်းယူကာ အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံတော် ထူထောင်ပြီလို့ကြေညာအပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကစလို့ အထင်ကရဖြစ်လာခဲ့သူပါ။
အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ရဲ့ နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့် လူပေါင်း ထောင်ချီသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ KNU ဥက္ကဋ္ဌတို့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိ၊ အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သွားရောက်မယ့်သတင်းတွေအပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ